Code Reader | စစ်ဆေးရေးစက် - HANYI
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစနစ်
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းစက်စီးရီး
Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစက်စီးရီးတွင်အမြင်အာရုံကင်မရာစစ်ဆေးခြင်းစနစ်၊ သန်း ၃၀၀-၂၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၆ မီလီမီတာမှ ၁၀၀ မီလီမီတာ focal length မှန်ဘီလူး၊ ပုံရိပ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ပျမ်းမျှမီးခိုးရောင်ကိရိယာများ၊ ထုတ်ကုန်၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်သည်။ Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစက်စီးရီးသည်တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီးလူသိများသောနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်များကိုဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အရရွေးချယ်နိုင်သည်။
Code Reader | ကုဒ်ဖတ်စစ်ဆေးရေးစက်ကိရိယာများ ကုဒ်စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးရေးစက် | Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစက်များ
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းစက်စီးရီးတွင်အမြင်အာရုံကင်မရာစစ်ဆေးခြင်းစနစ်၊ သန်း ၃၀၀-၂၀၀ မီလီမီတာ၊ ၁၆ မီလီမီတာမှ ၁၀၀ မီလီမီတာ focal length မှန်ဘီလူး၊ ပုံရိပ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ပျမ်းမျှမီးခိုးရောင်ကိရိယာများ၊ နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်သည်။
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series has high precision and stability, well-known international brands can be selected according to the actual needs of customers.
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series has small size and highly concentrated hardware. No need to worry about complicated external hardware when using, just select the required lens model.
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series has wide application occasions, can be applied to: mechanical processing, electronic processing, packaging, food and beverages, auto parts.
Operation Interface သည်ဖော်ရွေပြီးရိုးရှင်း။ လက်တွေ့ကျသည်။ စက်ရုံရှိလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည် IE ဘရောက်ဇာတွင်ကြည့်ရှုရန်ဝေးလံသောကြည့်ရှုခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်၊ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအဆင့်များကိုလျှော့ချပေးသည်။
အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်။ ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အလင်းအရင်းအမြစ်အသစ် strobe controller အသစ်ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series's vision camera is installed in the inspection station. When the material arrives at the inspection station, the photoelectric sensor triggers the vision camera to take pictures and inspect, and analyze and compare in the internal system. If the bar code, character or clear pattern, it will be released, otherwise the unqualified product will be rejected by the rejection agency.
Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series has been widely used in different fields.
1. Whats the lead time/manufacturing period for the Visual နှင့် Code စာဖတ်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းMachine Series？
hot Tags:: Visual And Code Reading စစ်ဆေးရေးစက်စီးရီး၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ၀ ယ်ရန်၊ စက်ရုံများ, အဆင့်မြင့်, စျေးစာရင်း, အရည်အသွေးမြင့်ခြင်း